DLINK internal modern driver — MYSTERY ZILLION
DLINK internal modern driver
February 2009 edited February 2009 in File Request
ကျွန်တော် DLINK internal modern ( DFM-5621S ) driver လေး အရေးတကြီး လိုနေလို့ပါခင်ဗျာ။ ရှိတဲ့သူများ ဖြစ်နိုင်ရင် upload တင်ပေးကြပါလား။ အွန်လိုင်းပေါ်က ဒီ ftp://ftp.dlink.co.uk/analogue_modems/dfm-562is/dfm-562is_drv_winxp.zip လင့်က အလုပ်မလုပ်လို့ပါ။ ဒီ error ပြနေပါတယ်
550 CWD Failed. No permission.
ဒီကဒေါင်းကြည့်လိုက် ရှာတွေ့တာဒေါင်းပေးလိုက်တာ ရမှရပါ့မလားသိဘူး သေချာကြည့်လိုက်တော့ detect ဆိုလို့။ :Oမှားသွားရင် ဆောရီးနော်:D
ဟုတ်ကဲ့.... ရတယ်ဗျာ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုရဲထက်ခင်ဗျား